Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Rosia » Voarara ny fivarotana finday Samsung any Russia
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • Vaovao Mafana Rosia • fiantsenana • teknolojia • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Voarara ny fivarotana finday Samsung any Russia.
Tamin'ny volana jolay, ny Fitsarana Arbitration ao Moskoa dia nanapa-kevitra ho an'ny Squin SA, orinasa Suisse iray izay nitory ny Samsung Electronics Rus Company momba ny fiarovana ny zon'ny patanty manokana, ary nandrara ny fiasan'ny serivisy fandoavam-bola Samsung Pay.
Samsung dia afaka mampiakatra ny fanapahan-kevitry ny fitsarana Rosiana ao anatin'ny iray volana aorian'ny nananganana azy.
Voarara ny varotra Samsung noho ny fifanolanana momba ny fampiasana ny Samsung Pay Service.
Samsung Pay dia natomboka tamin'ny Aogositra 2015 ary niseho tany Rosia herintaona taty aoriana.
Voarara ny fivarotana maodely finday miisa 61 ao amin'ny Federasiona Rosiana noho ny fifanolanana momba ny fampiasana ny Samsung Pау fanompoana.
Ny tribonaly arbitration ao Moskoa dia namoaka didy mandrara ny zanatany rosiana an'ny Samsung Electronics tsy hivarotra maodely finday Samsung marobe any Russia.
Araka ny ampahan'ny ampahan'ny didim-pitsarana fanampiny an'ny fitsarana ambaratonga voalohany, ny famatsiana sy ny fivarotana Samsung Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy Z Fold 2, Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 +, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20 +, Samsung Galaxy S20 Ultra, Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10 +, Samsung Galaxy S10 Lite, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9 +, modely Samsung Galaxy S8 ary ny sasany hafa voarara.
Ny fitsarana dia azo apetraka ao anatin'ny iray volana aorian'ny nananganana azy.
Tamin'ny volana jolay dia nanapa-kevitra ny Fitsarana Arbitration ao Moskoa ho an'ny Squin SA, orinasa Suisse iray izay nitory ny Samsung Electronics Rus Company momba ny fiarovana ny zon'ny patanty manokana, ary nandrara ny fiasan'ny serivisy fandoavambola. Samsung Pay.
Samsung Pay dia natomboka tamin'ny Aogositra 2015 ary niseho tamin'ny Rosia herintaona taty aoriana. Raha ny filazan'ny National National for Financial Research hatramin'ny martsa 2021, 32% an'ny Rosiana amin'ireo mpampiasa serivisy fandoavam-bola amin'ny finday no mampiasa Google Pay, Apple Pay - 30%, Samsung Pay - 17%.
Raha ny angom-baovao farany, ny varotra smartphone efa niasa ao Rosia nitombo 20% tamin'ny telovolana voalohany tamin'ny 2021 raha oharina amin'ny vanim-potoana mitovy amin'ny 2020.